Porn Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်မှန်လား၊ စိတ်ကူးယဉ်လား? Kurt Smith, LMFT, LPCC, AFC (၂၀၁၅) မှထုတ်လွှင့်သည် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
Porn Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်မှန်လား၊ စိတ်ကူးယဉ်လား? Kurt Smith, LMFT, LPCC, AFC မှတင်ပြသည် (၂၀၁၅)
Posted by ကို Kurt Smith က LMFT, LPCC, ကို AFC Fri, ဖေဖော်ဝါရီ 27, 2015 အပေါ်
porn နီးပါးလူတိုင်းဆွေးနွေးရန်များအတွက်တော်တော်လေးမသက်မသာဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရှက်စရာအထူးသဖြစ်နိုင်သည်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်နှင့်အတူတစ်ခုခုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်။ နှင့်ယခုအသစ်တခုပြဿနာ porn erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပုံစံအတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေန်းကျင်ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
သို့သော်တစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဟောင်းတွေယောက်ျားတွေပဲမဟုတ်လား မည်သည့်အသက်အရွယ်တို့သညျဤပြဿနာရှိနိုင်သည်ပေမယ့်ဟုတ်တယ်, အကြောင်း, များသောအားဖြင့်မှန်သည်။ porn erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, သို့သော်, ပုံမှန်အစည်းအဝေး ED ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအသစ်တစ်ခုပြဿနာဖြစ်တယ်, အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျားထိခိုက်။
သိသာထင်ရှားတဲ့တစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်ဖြစ်ခြင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဆေးပညာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပါအဝင်အရာနံပါတ်, အဖြစ်စိတ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်မဟုတ်။ ဤတွင်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများအနည်းငယ်နေသောခေါင်းစဉ်: မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, နှလုံးရောဂါ, ဆီးချိုရောဂါ, အချို့ဆေးညွှန်းဆေးဝါးများ; အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, ဆေးလိပ်သောက်, စိတ်ကျရောဂါ, စိတ်ဖိစီးမှု, အမျက်ဒေါသ, စိုးရိမ်ပူပန်; အဝလွန်, ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်, အနိမ့်လိင်စိတ်။ ဤစာရင်းတွင်ပုံရသည်ကဲ့သို့ပြည့်စုံစေ့စပ်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကြောင်းတရားများမဆိုဖော်ပြချက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ခံရဖို့အများဆုံးမဖြစ်နိုင်သည့်အရာ porn ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုမပြုမီ, porn မှဝင်ရောက်ခွင့် Playboy နှင့် Penthouse ကဲ့သို့ porno ဗီဒီယိုများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများမှကန့်သတ်ခဲ့သည်။ တချို့ယောက်ျားကဤ၏ collection များကိုရှိခဲ့ပေမယ့်အများစုကယောက်ျားတွေကန့်သတ်လက်လှမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကိုယခုညစ်ညမ်းပုံရိပ်များနဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ပ်ရန်ရရှိမှုနီးပါးကိုချက်ချင်းဆိုသလိုနှင့်အဆမဲ့စေတော်မူပြီ။
ဤအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ပေးသောအမြင်အာရုံဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များသည်အမျိုးသားများ၏သဘာဝအလိုဆန္ဒကို“ အမဲလိုက်ခြင်း” နှင့်လိင်အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်, ပုံရိပ်တွေကိုနှိုးဆွတစ်ခုအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျ၏အပျော်အပါးအများကြီးယောက်ျားအစဉ်အမြဲတိုးပွားလာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ရှာကြံ၏ဂိမ်းတစ်ခုထဲသို့ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေလှည့်ထားသည်။ ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် ယောက်ျား porn စောင့်ကြည့်အဘယ်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနှင့်၎င်းသည်ပုံမှန်ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်လာပြီးနာရီများအတွင်းနာရီပေါင်းများစွာမည်သို့စားသုံးနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောတယ်။
“ ကျွန်တော့်အိမ်ထောင်သည် ၃၅ နှစ်ရှိပြီ။ သူကအင်တာနက်ကိုတောင်မထိခင်မှာသူဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ သူသည် ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ သေတ္တာများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများသေတ္တာများဖြစ်သည်။ ယခုသူ၏ဖုန်းများတွင်…ဓာတ်ပုံ ၁၄၀၀၀ ရှိသည်။ ဟုတ်တယ်။ ၁၄၀၀၀။ ဒါကဖုန်းအဟောင်းပဲ။ အသစ်တစ်ခုမှာ 5,000 ရှိပါတယ်။ ယခုမှာအရန်ကူးဖုန်းတစ်လုံးရှိနေပြီ၊ မည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သူကပြanနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည် သူကကျော်ယူပြီးခံစားရသောအခါကပြောပါတယ်။ "
ဒီဟာကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ငါတကယ်ရှိခဲ့ပြီ ယောက်ျားအကြံပေးခြင်း၌ငါ့ကိုရန်ဝန်ခံ ပို။ ပင် porn ရှိခြင်း၏ဤကောင်လေးထက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ဒီခင်ပွန်းလိုပဲယောက်ျားများစွာကသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တာဟာဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ယောက်ျားတွေဟာအဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့မိန်းမကိုကြည့်ချင်တာကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလား။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်များများစားစားပြproblemsနာကကောင်းတာတွေတောင်မှပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်။ ဒါပေမယ့် porn ကမကောင်းဘူး။
အခုတော့ယောက်ျားတစ်ဦးတိုးပွားလာသတင်းပို့ကြသည် အခက်အခဲတစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့နှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်း သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ရင်းနှီးသောဖြစ်ခြင်းအခါ။ မိန်းမများ၊ မိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်တွင်လည်းအော်ဂဇင်ပြုသည့်ပြproblemsနာရှိသည့်အမျိုးသားများကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ အချို့ယောက်ျားများသည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပင်စိတ်မ ၀ င်စားနိုင်ပါ။ ၆ ယောက်ျားတိုင်းလိင်မှုကိစ္စကို ၆ စက္ကန့်တိုင်းစဉ်းစားကြပြီမဟုတ်လား။ သူတို့ဟာလိင်အာရုံစူးစိုက်မှုလို့မထင်ထားဘူး၊ အဘယ်အရာကိုပေးသနည်း။ porn စိုက်ထူပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်.
လိင်စိတ်နိုးထဦးနှောက်ထဲမှာပျော်မွေ့ဓာတု dopamine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘာမှလိုပဲသိပ် dopamine ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကြည့်ရှု porn လေ့ဖြစ်လာသည့်အခါကဦးနှောက်အတွင်းရှိအာရုံကြောလျော့နည်းထိခိုက်မခံနဲ့ dopamine မှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် (ကအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူ) ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီး arousal အတွက်လုံလောက်သော dopamine ထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ခြင်းအတွက်ရလဒ်များ။ ဦးနှောက်၌ဤပြောင်းလဲမှု၏ရလဒ် (လမ်းဖြင့်နောက်ပြန်လှည်ဖြစ်သော) နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရ ပို. ပို. ညစ်ညမ်းလိုအပ်နေယောက်ျား၏ကြိုတင်ဖော်ပြချက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
porn erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာဒဏ္ဍာရီကြောင်းပြောပါသူအချို့ Clinician ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းလွန်းအန္တရာယ်ကင်းယုံကြည်သူတွေကိုအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်မနှင့်အတူသဘောတူကိုလည်းမရာ၏။
porn နှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါအမှန်တရားကရေတိုရေရှည်ပျော်မွေ့ပေးသည်သို့သော်ရေရှည်ပြဿနာများကိုလာနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအထပ်ထပ် porn မှ Masturbating ဟာလိင်စိတ်နိုးထများအတွက်လိုအပ်သောတံခါးခုံအဖြစ်အော်ဂဇင်ပေါ်ပေါက်။ ရလဒ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်ချင်းမရှိတော့စိတ်လှုပ်ရှားပါဘူးဖန်တီးရန်အသုံးပြုကြောင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု, စစ်မှန်သောသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှိမရှိ, ဒါ ပို. ပို. များနှင့်အသစ်များနှင့်အသစ်များလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ပါသည်အဖြစ်။
ဤအရာအလုံးစုံကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်ယခင်ကရှိခဲ့ဖူးသူတစ် ဦး ဦး နှင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကဲ့သို့၎င်းအသုံးပြုခဲ့သည့်အတိုင်းမည်မျှမည်မျှဖြစ်ပေါ်သည်ကိုသိရန်မလွယ်ကူပါ။ ငါညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုအတွက်ကုသခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကသူမဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
ကောင်းမွန်သောသတင်း porn erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု Reversible လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြည့်ရှုရပ်တန့်ခြင်း, ပုံမှန်အား3လအတွင်းသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine အဆင့်ဆင့်ပုံမှန်အဆင့်ဆင့်ထံသို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းကြည့်ရပ်တန့်တာကိုလွယ်ကူသည်ပြုမိထက်ကပြောသည်။ ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များနေသော်လည်း porn နှင့်၎င်း၏လွယ်ကူသောအသုံးပြုနိုင်စွမ်း၏စွဲလမ်းအာဏာကိုကအလွန်ခက်ခဲအများဆုံးယောက်ျားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီမပါဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရပ်တန့်ရန်အဘို့အစေ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်လေးတွေအဖြစ်ကိုကြား mom, ဒဏ္ဍာရီ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ အကျော်ကြားဆုံး mom, ဆိုရိုးစကားတစ်ခုမှာခဲ့, "ဂျာကင်အင်္ကျီကိုတင်။ မင်းအအေးမိလိမ့်မယ်” သို့သော်အခြားတဦးတည်းထီးခန္ဓာဗေဒကပါဝင်ပတ်သက်, “ အကယ်လို့မင်းကဒီဟာကိုဆက်ကစားနေရင်တစ်နေ့နေ့မှာပြုတ်ကျလိမ့်မယ်။ ” တကယ်တော့ဒါဟာတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ “ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင့်အားမျက်စိကွယ်စေမည်။ ” သိသာထင်ရှားတဲ့ကပြိုလဲသွားမှာမဟုတ်သလိုသင်မျက်စိကန်းသွားလည်းမဟုတ်, ဒါပေမယ့် ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းပြီးအမှန်တကယ်ကတော့ porn erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကအကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒဏ္it'sာရီတစ်ခုပါ။.